China Hub Amabombo ifektri abakhiqizi | I-Shallow Yong
Ukufakwa kwehabhu kusetshenziselwa i-axle yemoto ukuthwala umthwalo futhi kunikeze ukuqondiswa okunembile kokuzungeziswa kwehabhu lamasondo. Ayithwali kuphela umthwalo we-axial kepha futhi ithwala nomthwalo osabalalayo. Kuyingxenye ebalulekile yokulayisha imoto nokujikeleza.
Umsebenzi omkhulu wokuthwala ihabhu lezimoto ukuthwala umthwalo nokuhlinzeka ngokuqondiswa okunembile ngokushintshaniswa kwehabhu lamasondo. Ayithwali kuphela umthwalo we-axial kepha futhi ithwala nomthwalo osabalalayo. Kuyingxenye ebaluleke kakhulu.
Ukuthwala kwendabuko kwesondo lemoto kuqukethe amasethi amabili we-tapered roller bearings noma ama-ball bearings. Ukufakwa, ukufaka amafutha, ukufaka uphawu nokulungiswa kwamabheringi kwenziwa emgqeni wokukhiqiza izimoto.
Isakhiwo sakhiwe ngesihlalo esithwele, i-flange, iringi yangaphakathi, ikheji, into egingqikayo, inzwa ye-ABS, indandatho yegiya lokungeniswa, ibhawodi yamandla amakhulu, izingxenye zokubekwa uphawu nezinye izinto.
Lesi sakhiwo senza kube nzima ukuhlangana embonini yezimoto, izindleko eziphezulu nokungathembeki kahle. Ngaphezu kwalokho, lapho imoto isendaweni yokulungisa, ukuthwala kudingeka kuhlanzwe, kufakwe i-oyile futhi kulungiswe.
Iyunithi lokuthwala ihabhu lakhiwa ngesisekelo sebhokisi lokuxhumana elijwayelekile le-angular kanye ne-tapered roller bearing. Kuthatha amasethi amabili amabheringi esewonke. Inezinzuzo zokusebenza okuhle komhlangano, ishiya ukulungiswa kokuvunyelwa, isisindo esincane, isakhiwo esihlangene, umthamo omkhulu wokulayisha, ukufaka uphawu kungagcwaliswa ngamafutha kusengaphambili, uphawu lwangaphandle lwehabhu lushiywe futhi ukugcinwa kukhululekile. Kusetshenziswe kabanzi ezimotweni Kukhona nomkhuba wokwandisa kancane kancane ukusetshenziswa kwamaloli.
Shandong qianyong yokungenisa nokuthekelisa ukuhweba Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi professional yezimoto ihabhu amabombo. Ngaphezu kokukhishwa kwempahla eluhlaza, inkampani inolayini wayo wokukhiqiza izingxenye, umshini wokwelashwa wokushisa othomathikhi, indiza, indingilizi engaphandle, umjaho womgwaqo, umbuthano wangaphakathi, ukuqeda izinto ezinkulu neminye imishini; ikakhulu ikhiqiza ihabhu lesondo lezimoto, isondo lokungezwani, umshini wokuqondisa, i-air conditioner, i-UC sphere yangaphandle, imishini yezolimo, ibhola le-groove ejulile, okungekho ejwayelekile nokunye ukucaciswa kwamabhere. Le nkampani inobuchwepheshe obuhle bokukhiqiza, imishini esezingeni eliphezulu, izindlela zokuthola okuphelele nekhwalithi yomkhiqizo ozinzile futhi onokwethenjelwa. Imikhiqizo ngokuyisisekelo ithengiselwa iYurophu, iMelika, i-Southeast Asia, Middle East nakwamanye amazwe nezifunda.
Langaphambilini Deep Groove Ball Amabombo
Olandelayo: Eyindilinga Roller Bearings
QYBZ Ihabhu Amabombo I